Obugqokekayo amagajethi smart ubelokhu kuyanda, nazo zonke ngokwehlukahlukana kwabo, mhlawumbe impumelelo enkulu ezijatshulelwa ukuqina zomsebenzi - abawona ayebiza amawashi smart, kodwa kungenye into ehluke kakhulu sokusebenza. Uyini Tracker ukuqina? Lokhu namasongo "smart" ukusiza ukugcina umkhondo isimo yomsebenzisi okungokwenyama.
Yiqiniso, iningi izethameli eziqondiwe kokufaneleka zomsebenzi - abantu ayehilelekile ezemidlalo. Nokho, uma ukuthenga kwabo esizwakalayo sokuthukuthela? Ingabe ukuqina zomsebenzi ayadingeka ukuze futhi elula, njengoba livela kubo konjiniyela hhayi okunye esikhundleni sako kalula uma "umngane" ethembekile eshiwo yilowo nalowo yesimanje - smartphone? Ake siphenye.
Ukuze uqale, thina kukukhumbuza main ongakhetha zomsebenzi. Ngeke cabanga yimuphi imodeli ngamunye, ngoba kanye efanayo angenamkhawulo ukubiza "big abathathu 'opharetha ezifana MegaFon, Beeline futhi MTS, efana nomunye ngakho zonke zomsebenzi ngokuya ukusebenza.
Ngakho, lapha ongakhetha zabo eziyinhloko:
Izinketho kubagijimi - ukuhlaziya izifundo kwesikhathi ngokubala ama-kilojoule okudla izinyathelo, njll
Ukulala Ukuhlaziya - ukuqina trekeroy ungakwazi ukulandelela ezigabeni zokulala futhi izinga layo, ungavusa umuntu ngesikhathi esigabeni okusheshayo (elihle kakhulu Awakening)
Vumelanisa smartphone yakho ne-PC yakho
Isaziso izingcingo wathola nge-SMS kanye nezinye izenzakalo eziye zenzeka nge smartphone
Nokho, kubalulekile ukuphawula ukuthi ezimbili zokugcina ongakhetha azitholakali kuwo wonke zomsebenzi.
Ngokuvamile, njengoba ungabona, mhlawumbe hhayi kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ngisho noma okukhethwa kukho okutholakalayo, eqinisweni, akuhambanga kahle konke. Omunye uye kuphela ukuya kunoma iyiphi ingosi futhi uqale ukufunda izibuyekezo mayelana okuvelayo abanikazi ukuqina zomsebenzi ngokushesha iba sobala. Izikhalazo abaningi, simane nje ukhombe main wabo.
Inkinga eyinhloko - ukungakwazi ulungise Tracker ukuze izinhlobo ezahlukene umsebenzi. Yiqiniso, kukhona isethi bakudala, isibonelo, ukuhamba, ukugijima, kuzuba. Lapha, ngokwesibonelo, uma ufuna ukubala ukuthi usebenzisa engakanani kilojoule ukwenza ejimini ku simulators ezahlukene, Tracker yakho ngeke bakwazi ukukusiza kulokhu.
Eyesibili ethile enkulu - idatha AMANGA. Software algorithm zomsebenzi kakhulu ezingabazisayo kakhulu, abanikazi abaningi "ojabulisayo" bhala mayelana lokuthi ngezinye izikhathi kilojoule sokuhamba enqwabelene futhi lapho uhleli, kodwa, isibonelo, kakhulu zhestikuliruesh.
Esinye mzuzu hhayi kumnandi - zomsebenzi uxhumana, njengoba umthetho, kuphela izicelo ezikhethekile engumngane, ngokuvamile nje kancane ukusebenza, kodwa futhi ukusebenza nge lag njalo.
Futhi ekugcineni, ukuhlolisiswa ubuthongo - chip, okuyinto edonsela abasebenzisi eziningi kangaka. Yiqiniso, ithuba ukuhlola kahle indlela imisebenzi kulo msebenzisi inketho ayinayo, kodwa ngo-2007 i-American Academy of Medicine wanquma ukuthi ukunquma ngokunembile esigabeni samanje sokulala: i electroencephalogram ngoba frontal, enkabeni occipital iziteshi, EOG zokuqopha electromyogram imisipha genial. Ngakho-ke akuyona neze "smart" Iwakho engalweni yakho ungakwazi ngempela ukuqonda lokho isigaba wobuthongo kuyinto umsebenzisi.
Ngokuvamile, njengoba ungabona, iningi yamemezela sibonisa zomsebenzi ukuqina - hhayi ningi than lamaphupho abakhiqizi yabo. Nokho, akufanele athukuthele. Igajethi ephelele ezemidlalo futhi kukhona cishe nsuku zonke uzolisebenzisa ephaketheni lakho - smart phone yakho.
Yiziphi izinzuzo zayo? Okokuqala, ukubala umzimba ukuthi ungakwazi ukujabulela hhayi kuphela izinzwa esakhelwe, kodwa futhi ukufinyelela ku GLONASS GPS. Leli qiniso ihlinzeka esinembile futhi ivumela ukuhlola umsebenzi nemingcele ngaphezulu, ezifana ukushesha futhi ulinganisele. Okwesibili, smartphone namuhla omningi isofthiwe, lezi zinhlelo zivumela ukuba uhlole umsebenzi elikhiqizayo cishe kunoma iyiphi uhlobo sport - kusukela table tennis ukudansa. Ngaphezu kwalokho, isicelo esikhethekile ungavula smartphone ibe izigaba "otslezhivatel" ukulala. Yiqiniso, kuyoba okufanayo okunemibandela futhi eyahumusha njengokungathi bazithoba zomsebenzi ukuqina, kodwa iqiniso liwukuthi - lokhu kukhetha kutholakala.
Akunakwenzeka ukuba uqaphele yokuthi smartphone ngeke enze kube nokwenzeka ukuba ulalele umculo, ngoba bambalwa kakhulu abantu bayathanda bazibandakanya emsebenzini owodwa owenziwe ukuthula. Ngaphezu kwalokho, uma gijima ekuseni ngokuzumayo weza amakhanda ethu ifotho kwelanga, smartphone bese ukophula.
Futhi-ke, ukusetshenziswa smartphone esikhundleni Tracker ukuqina - ithuba yekubeka imali, kanye namuhla esibucayi ezweni ukusindisa kubalulekile ukuzama kuyo yonke into, kuhlanganise service hhayi ngokuqondile opharetha mobile futhi ngokusebenzisa wabenza, ngokusebenzisa inkampani "Corporation nokuxhumana "isibonelo, okuyinto, by the way, akagcini ngokunikeza eshibhile ukuxhumana mobile, kodwa ngokuvamile inika izinombolo mobile segolide.
Mhlawumbe kuphela ngokunenzuzo zomsebenzi ukuqina - compactness yabo. Ukuze abasubathi ukubaluleka ikwazi ukuhamba ngenkululeko, futhi ngokuvamile abazi lapho uxhume smart phone, okwamanje lapho Tracker ukuqina kungenziwa sizikhandle isebangeni esandleni.
Yiqiniso, ekugcineni, unquma ukuthi ukukhetha, kodwa mhlawumbe uma benza ukukhetha bebheke Tracker ukuqina, akufanele uthathe amanye imodeli dorogushchuju, akunakwenzeka ukuba isebenze kahle, kodwa umonakalo kuzokwenza wesikhwama. Nokho, futhi, unquma.
Isihloko nkulumo ingase isekelwe endabeni www.corporacia.ru isayithi
Izikena Tablet: imodeli kanye nokusetshenziswa
Uyini iphedi: mouse, trackball noma trackpoint?
Steam Iron Philips Azuri: izici, ukuqhathanisa nesincintisana kanye nokubuyekeza
Okhiye Special on the ikhibhodi. Igama keys esikhethekile ku ikhibhodi
Myositis: izimpawu, izimbangela, ukwelashwa